16 Sanadood Kadib Weeraradii 11/9 ee Lagu Burburiyay Dhaqaalaha Mareykanka Al Qaacidda Ma Baaba’day?. – Bogga Calamada.com
16 Sanadood Kadib Weeraradii 11/9 ee Lagu Burburiyay Dhaqaalaha Mareykanka Al Qaacidda Ma Baaba’day?.
September 11, 2017 3:32 pm Views: 201
16 Sanadood ayaa kasoo wareegtay markii ay dhaceen weeraradii 11/9 sanaddii 2001 ee lagu qaaday magaalooyinka New York iyo Washington dalka Mareykanka.
Weeraradaasi oo ay fuliyeen 19 dagaalyahan oo badankood kasoo jeeday dhulka Xarameynka ee Sacuudiga Carabiga loo yaqaan ayaa dhulka geliyay dhaqaalaha dowladda Mareykanka.
Weeraradii lagu burburiyay daarihii Mantaanaha ahaa ee magaalada New York waxaa lagu dilay dad ka badan 3,000 oo qof sida ay sheegtay dowladda Mareykanka balse hay’adaha udooda xuquuqul insaanka waxay sheegaan in khasaaruhu intaasi ka badanyahay.
Weerarkii 11 september 2001 ayaa waji cusub geliyay loolanka melleteri ee caalamka wixii xilligaasi ka dambeeyay Mareykanka iyo xulufadiisa NATO waxay qaadeen ol ole ballaaran oo ka dhan ah Muslimiinta iyagoo ugu magac daray “dagaalka ka dhanka ah Argagaxisada”.
Mareykanka iyo NATO waxay ku duuleen wadamada Afghanistan iyo Ciraaq, dagaalladii kasoo bilaawday labadaasi wadan ayaa caalamka islaamka ku fiday waxaana la beegsaday safaarado reergalbeedku leeyihiin iyo danaha mareykanka ee caalamka oo idil.
Weeraradii 11/9 waxaa mas’uul ka ahaa Urur weynaha Al Qaacidda oo xilligaas uu hoggaaminayay Sheekh Osama Bin Laden Raximahullaah.
Iyadoo 16 sanadood laga joogo weeraradii New York iyo Washington Mareykankuna uu qaaday duullanno ka dhan ah Alqaacidda iyo Xulufadeeda wali waxaa muuqata in dagaalka uusan fari ka qodneyn islamarkaana xoogaga jihaadiga ah isku fidiyeen wadamo farabadan oo caalamka islaamka ah.
Dad Badan ayaa isweydiinaya sida uu noqon doono dagaalka caalamka ka socda maaadaama Hoggaanka Cusub ee Mareykanka uu qabtay Nin Cunsuri ah oo markii uu madaxtinimada u cararay ku goodiyay in uu xasuuqi doono dadka muslimiinta isagoo durbadiiba fuliyay qaar kamid ah goodiskiisa oo ahaa in Mareykanka uu ka tarxiili doono dadka muslimiinta Muhaajiriinta ah.
Tan iyo wixii ka dambeeyay markii ay dhaceen weeraradii 11 September mareykanku wuxuu sare u qaaday weerarada ka dhanka ah dadka muslimiinta, diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Drone-ka loo yaqaan ayaa kumanaan qof ku dilay wadamo ay kamid yihiin Pakistan, Yemen. Afghanistan iyo Suuriya waana dagaal ka dhan ah islaamka iyo muslimiinta.
Falanqeeyayaashu waxay sheegayaan in Alqaacidda ay sida dhimbil dab ah oo kala ukala firirtay waxay kasoo bilaabatay Afghanistan hadda waxay faracyo xooggan ku leedahay wadamo ay kamid yihiin Soomaaliya, Pakistan, Hindiya, Yemen, Maali iyo Aljazaa’ir waxayna laf dhuun gashay ku noqotay wadamada Reergalbeedka iyo xukuumadda caalamka islaamka kajira ee ku dhaqma waxa loogu yeero Sharciyadda Caalamiga ah.
Dhageyso Barnaamijka Booqashada Andalus Iyo Burjukada Magaalada Ceelbuur.